चिकित्सक संघ कोसीको अध्यक्षमा डाक्टर फरवार्ड सिलवाल निर्वाचित - PT Online News
६ माघ, २०७७ १८:३४
नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोसीको अध्यक्षमा डाक्टर फरवार्ड सिलवाल निर्वाचित भएका छन् । डाक्टर कैलाशकुमार श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै सिलवाल दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।निर्वाचित भएका डाक्टर सिलवालले ३६१ मत ल्याएका छन् । अध्यक्षका उम्मेद्वार डाक्टर श्रेष्ठले २७१ मत ल्याएका छन् ।
नयाँ नेतृत्वका लागि आइतबार र सोमबार निर्वाचन भएको थियो ।वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डाक्टर सञ्जिवकुमार ठाकुर, उपाध्यक्षमा डाक्टर यज्ञराज खरेल, महासचिवमा डाक्टर राजेन्द्र चौधरी, सहसचिवमा डाक्टर सुनिल रेग्मी र कोषाध्यक्षमा डाक्टर सुधिर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । सहकोषाध्यक्षमा जुविन सिलवाल निर्वाचित भएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. सञ्जीवकुमार ठाकुरले ३ सय १८ मतसहित विजयी हुँदा डाक्टर नविन कर्णले ३ सय २ मत ल्याएका थिए ।उपाध्यक्षमा खरेलले ३ सय २२ मत ल्याएर विजय भए । उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा बालकृष्ण साह २ सय ९७ मत ल्याए ।
महासचिवमा राजेन्द्र चौधरीले ३ सय ५१ मत ल्याएर विजय हुँदा रविनराज सिंहले २ सय ७५ मत ल्याएका थिए । कोषाध्यक्षमा श्रेष्ठ समूहका डा. सुधिर श्रेष्ठले ३ सय १० मतसहित निर्वाचित हुँदा डा. सिलवन्तसेन श्रीवास्तवले ३ सय ६ मत ल्याएका थिए ।सहकोषाध्यक्षमा डा. जुविन सिलवालले ३ सय ८० मत ल्याए । सहकोषाध्यक्षका उम्मेदवार डा. सरवेसकुमार झाले २ सय ४८ मत ल्याएका थिए ।
फागुन १५ गते सामरी कलाकार संघले ल्होछार बिशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम...
नेपाल तामाङ समाज ओमानको तेस्रो अधिवेशनद्वारा अध्यक्षमा अनिता घिसिङ तामाङ...
रुबिभ्यालीमा २८५७ औं सोनाम ल्होछार कार्यक्रम ऎतिहासिक सम्पन्न